PersonalDNA - Profaịlụ nke onwe | Martech Zone
PersonalDNA - Profaịlụ nke onwe
Na Mọnde, Nọmba 28, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Otu enyi m anaghị ele ule ule anya. Achọrọ m ha n'ezie, mana anaghị m enwe nkasi obi ịdabere na ha. Enweela m ndị were m n'ọrụ na-eji ule ahụ wee zụlite otu yana ịghọta etu ndị otu ahụ ga-esi mekọrịta ha. N'ịbụ 'onye ọchịchị' zụrụ site na Mmepe Akụkụ International, Obi na-eru m ala inyocha ule ndị mmadụ na-ejighị ha mee ihe iji kpebie mmekọrịta ndị anyị na ha ga na-arụ. Mgbe m rụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ebe a zụrụ anyị, ule ndị ahụ rụrụ ọfụma n'ihi na ha dugara mmepe nke onwe ya banyere otu anyị si eso ndị ọzọ akpakọrịta.
Mgbe m kwagara na mbụ na-arụrụ ọrụ onye na-enyeghị nsogbu ọ bụla ọzụzụ, na Myers-Briggs nwalee ọnya ịbụ ozi ọzọ ejiri mee gị. Ọ dịịrị onye njikwa mfe ngọpụ ọ bụghị na-eduzi mgbe ha nwere ike ịkọwapụta ule mmadụ. Ọ na-atụgharị ka ọ ghara iji ya arụ ọrụ kama iji rụọ ọrụ. Understandingghọtaghị data nwere ike ibute mkpebi ka njọ karịa ịghara inwe data ma ọlị. Anyị na-ahụ nke a site na ntuli aka, nyocha ndị na-adịghị mma, ìgwè ndị na-elekwasị anya na-adịghị mma, na nyocha adịghị ike. Nnwale ndị mmadụ dị iche. Itinye aha onye njikwa ma ọ bụ onye nlekọta gị apụtaghị na ị maara etu esi ejikwa ma ọ bụ na-elekọta, na n'ezie apụtaghị na ị nwere ike nyochaa ule mmadụ iji gbanwee ụzọ gị na ha si arụ ọrụ. Ọ bụ ya mere m ji chee na enyi m kpọrọ ha asị… anaghị m ata ya ụta. Ọ ga-adị m ka m na-atụtụ akwụkwọ bayoloji ịwa gị ahụ, ị ​​ga-atụkwasị m obi? Echeghị m.
Nke ahụ kwuru, enwere m mmasị na akụkọ PersonalDNA na nkọwa ha dabere na nrubeisi gị. Njikwa ahụ dị na-emetụtaghị maka ịhọrọ azịza gị, enwere m ike ịba ụba nke ngwa ha. Ọzọkwa, akụkọ ahụ gwụchara bụ eziokwu na, nke kachasị mma. Enwere ozi zuru oke iji see foto gị, mana ọ bụghị nke ukwuu na mmadụ nwere ike ijide ozi ahụ megide gị. Lelee
m Personal Dna Report iji hu n'onwe gi.
Onye ndu ndu… Nke ahụ masịrị m!
Scion - nke a bụ ihe nlereanya ọhụrụ nke ahịa?
Nkwụ ụgwọ ụgwọ Math
Nov 29, 2006 na 8:08 PM
Emere m ụfọdụ ule, ụfọdụ n'ime ha na-enyekwa nsonaazụ ziri ezi nke ọma na ọ bụ naanị ajụjụ ole na ole a jụrụ. Echere m na ha nwere ike ịbụ ezigbo nduzi maka ịtọ otu. Ma ha enweghị ike ịbụ naanị ọrụ eji eme nke ahụ.